Mbido nke Cadastre Multi-nzube maka mmepe na-adịgide adịgide na Latin America - Geofumadas
Ọganihu nke Cadastre Multi-Land maka mmepe mmepe na Latin America
Ọktoba, 2018 cadastre
Nke a bụ isiokwu nke Seminar nke a ga-enwe na Bogotá, Colombia, na ụbọchị 2 gaa na 26 nke November nke 2018, nke ndị òtù Colombian Association of Cadastral Engineers and Geodests Association ACICG haziri.
Mmasị na-akpali mmasị, bụ nke a gbalịsiri ike iji mee ka ndị na-ekwu okwu mba na mba dị iche iche site na ngalaba ụlọ akwụkwọ, agụmakwụkwọ na nke onwe na isiokwu nke Cadastre; N'ezie otu n'ime nsogbu ga-abụ mmezu nke nchịkọta na ịhazi ihe ọmụma enyere. Agbanyeghi na aha seminar a nwere oke ochicho nke ichoro nke Latin America, seminar a biara na mba bara uru na obodo a na-ekpo oku nke n’egosi otutu oria nke imezi ochichi ala ya na ihe mmekorita nke oru di iche iche, ihe omumu, ụlọ ọrụ nkeonwe na ihe ịma aka iji jigide nguzozi n'ihi nrụpụta ọrụ teknụzụ na nke nke ịnọgide na-enwe njikwa nke ókèala na ebumnuche mbụ ya: imepụta nwa amaala ọrụ ka mma.
Ebumnuche nke ihe omume ahụ:
Mepụta ohere maka ikwekọrịta na mmekọrịta nke ndị ọkachamara na ndị mmadụ na - ejikọta na nsogbu nke cadastre multi-purpose, nke na - enye ohere iji nyochaa usoro ihe omimi, yana mmezi nke teknụzụ ọhụrụ n'ị nweta ihe ọmụma ahụ ga - etinye n'ime usoro ndị na - data nke multi-purpose cadastre.
Mee ka usoro ihe omumu sie ike ma mepe ohere maka ikere òkè na nyocha nke mba na nke uwa nke ndi ọkachamara jikọtara usoro nhazi usoro nlekota oru na ihe onwunwe.
Achịchị nke Tuesday 23 nke October.
Nhazi usoro ọmụmụ
José Luis Valencia Rojas - Onye isi ala ACICG
William F. Castrillón C. - Onye Isi Ọkwa Mahadum UDFJC
Ing Eduardo Contreras R. Odeakwụkwọ nke Gburugburu-Ọchịchị nke Cundinamarca
Arq. Andrés Ortiz Gómez Secretary District Planning
Cesar A. Carrillo V. Onye odeakwụkwọ nke atụmatụ Gọọmentị nke Cundinamarca
Data ma ọ bụ akụrụngwa? - Ebe na-amalite a cadastral modernization oru ngo.
Ọhụụ nke Cadastre na ndebanye aha na nhazi usoro.
Golgi Alvarez-Honduras - Fabian Mejía -Colopoli
Ojiji nke ngọngọ maka mgbatị akwụkwọ nke gọọmentị na Haarlem-Holland.
Ịmekọrịta ozi maka Atụmatụ akụ na ụba na na mpaghara Bogotá.
Jiri ozi sitere na Superintendence nke Notarial na ndekọ: Ngbanwe nke aha aha, englobes na desenglobes.
Iji nhazi ala site na iji map na ngwa ndị jikọtara cadastre na obodo site na ArcGis
N'iji usoro metrik ejiri na mba ebe IDB mepụtara usoro cadastre multipurpose (ikpe Bolivia).
Agenda nke Wednesday 23 nke October
Ọkachamara n'ihe gbasara atụmatụ ọnụahịa nke ụlọ.
Manuel Alcazar - Spain
Na cadastre na nchekwa iwu na njide ala dị ka ihe achọrọ maka mmepe ime obodo.
Ọhụụ na ọrụ nke ndị ọrụ aka ha na Cadastre Multi-Land.
Kwado akụ na ụba ọha na mmepe ọrụ, yana ngwaọrụ njikwa ala.
Mmetụta nke nchịkwa na nlekọta nke ozi cadastral na njikọ ya na agụmakwụkwọ.
Mmekọrịta data site na itinye usoro LADM-COL maka ịba ụba cadastre.
Sergio Ramírez na Germán Carrillo - Colombia
GNSS spatial geodesy, mmepe na-adigide na multipurpose cadastre na Colombia: mmezu na nsogbu.
Multi-nzube Cadastre nke Quebec (Canada): Ọrụ bụ isi nke usoro ọkachamara.
Multipurpose Cadastre: Ntọala maka formalization nke ime obodo.
Dere nke Thursday 24 nke October.
Map nke nchedo gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi maka hydrocarbons.
Uru nke ezigbo cadastre, maka njikwa ala na mpaghara hydrocarbon.
Moddị esitere na LADM dịka ngwá ọrụ maka atụmatụ ojiji ala.
Poyatos -Spain na Alejandro Tellez - Colombia
Ọrụ ọhụrụ nke Cadastral Engineer na mgbanwe nke ụdị cadastral. Site n'okpukpe nke oma ka otutu.
Dị nyocha nke ọnụahịa sitere na mmemme ọha na eze.
Ebumnuche na Ọhụụ nke Cadastral Engineering na Multipurpose Cadastre Process (Iwu 1753/15).
Ndị Nlekọta Dabere na fordị maka Cadastre multipurpose - Cadastre 5D.
Ọganihu na ihe ịma aka na mmejuputa iwu nke cadastre ịkwa ụba
The multipurpose cadastre na Colombia: Echiche sitere na Cadastral Authority - Agustín Codazzi Geographical Institute.
Cadastre na Colombia: Oge gara aga, ugbu a na ... n'ọdịnihu?
Imechi ihe omume
Dance Group nke District University «Francisco José de Caldas»
Na nkenke, ihe omume ndị a dị oke mkpa iji mepụta oghere maka ntụgharị uche na nhazi nke atụmatụ nke n'ezie niile na-ebu ebumnuche ha kachasị mma mana na na omume ọ naghị adị mfe nnweta n'ụzọ kachasị mma n'oge na arụmọrụ. Ma ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ nke ndị na-ahazi ihe omume ahụ, n'ihi mmasị nke a na-enye maka mba ndị ọzọ na ọnọdụ-maka ihe kpatara ịdị irè nke mbọ a mere- ọ bụrụ na, ewepu ọdịnaya nke ọdịnaya ahụ, ọ ga-ekwe omume ịdekọ akụkụ ndị ahụ na ịchọ oghere ebe enwere ike inwe eriri nke ịga n'ihu maka iji ya mee mkpebi, ọ ga - abụ ihe kachasị mma nzukọ ọmụmụ ihe ahụ nwere ike itinye.
Isi ụlọ ọrụ a ga-anọ na Gọọmentị nke Cundinamarca, Mgbakọ Antonio Nariño na Calle 26 # 51-53. Bogota Colombia. Lee ebe nrụọrụ weebụ ahụ.
Previous Post«Previous Bentley Systems na-eme ka nzọ dị ike nye GIS mgbe ị nwetara Agency9
Next Post Ndị mmeri nke onyinye nrite kwa afọ maka Innovation in InfrastructureNext »